Inona no tokony ho fantatrao momba ny lalàna momba ny fianakaviana | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ny tokony ho fantatrao momba ny lalàn'ny fianakaviana
Ny lalàn'ny fianakaviana dia mifanakalo amin'ny olana ara-pianakaviana toy ny fisaraham-panambadiana, fanambadiana, fananganan'anaka ary fiaraha-miasa amin'ny tokantrano. Matetika ny lalàn'ny ankohonana dia misy antoko mifandray amin'ny ra na fanambadiana nefa misy fiantraikany amin'ny fifandraisana lavitra na sanatria.
afaka matoky ianao sy ny olon-tianao
Fiatrehana ny krizy amin'ny fianakaviana
Satria ny raharaha momba ny lalànan'ny fianakaviana dia tena sarotiny ka mila fikarakarana fanampiny miaraka amin'ny fahatakarana ara-dalàna. Na izany aza, noho ny fanampian'ny matihanina matihanina azo antoka, afaka omena toky ianao sy ny olon-tianao amin'ny fisoloana tena sy ny fiarovana amin'ny fizotran'ny lalàna.
Misy mpisolovava fianakaviana za-draharaha any Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, sy emirates hafa any UAE izay mikarakara manokana mandritra ny krizy ara-pianakaviana ireto. Mahatsapa ny hasarobidin'ny fahatsapana sy ny fahatsapana an'ity tranga ity izy ireo ary mitarika ireo olona voakasik'izany.
Ao amin'ity lahatsoratra ity, hitari-dalana anao izahay hahatakatra bebe kokoa ny antony ilainao mpisolovava fianakaviana sy ny dingana ara-dalàna izay manaraka ny ankamaroan'ny fifandirana ao amin'ny fianakaviana.
Fa maninona no mila mpampian-dalàna izahay mianakavy?
Ny antony mahazatra indrindra manakarama mpisolovava lalàna ao amin'ny fianakaviana dia:
Rehefa mikasika ireo olan'ny fisaraham-panambadiana, ireo mpiray dia tafiditra dia manakarama mpisolovava manokana izay mikasa ny drafitry ny fanamorana farany mba hialana amin'ny fitsarana. Ny mpisolovava mpisolovava koa dia mahavita mizara fananana mariazy, manombatombana ny fanohanana ny spousal, ary manomana drafi-pananana sy fanampiana ary fitsidihana (raha ilaina).
Fanampiana zaza / Fanohanana ny zaza
Ny didim-pitsarana sy ny fifanarahana momba ny fanarahan-dalàna izay misy ny fitaizana sy ny fanampiana ny zaza dia tafiditra matetika amin'ny tranga fisaraham-panambadiana lehibe, na izany aza, dia mety hamboarina izy ireo rehefa mandeha ny raharaha. Ohatra, ny fanohanana ny zaza dia mety hamboarina aorian'izay rehefa miova ny toe-bolan'ny ray aman-dreny tsy tsy arovana.
Ny trangam-pianakaviana dia matetika no natolotry ny reny matetika mba hahazoana antoka ny fandoavana ny fanampiana amin'ny zaza tsy eo. Indraindray koa, ny ray aman-dreny dia apetraky ny raim-pianakaviana mba hananana fifandraisana amin'ny zanany. Amin'ny ankapobeny ny fanaovana fitiliana DNA no ampiasaina mba hamaritana ny fitaizana.
Fananganan-jaza / fikolokoloana
Ny fikolokoloana na fikolokoloana fatratra dia fomba sarotra, ary miovaova arakaraka ny karazana fananganan'anaka, izay niavian'ny zaza, ny fahasamihafana amin'ny lalàna ao amin'ny fanjakana ary ny fepetra maro hafa. Zava-dehibe ny manatona mpisolovava fianakaviana. Na izany aza, ny olona dia mandray ireo zanany mpitaiza tsy misy fepetra ara-dalàna mandritra ny dingana.
Ny torolalinao amin'ny raharaham-pianakaviana
Ny komity mpitari-dalana ny fianakaviana dia dingana voalohany amin'ny fizotran'ny fisaraham-panambadiana. Rehefa misy raharaha momba ny ankohonana, ny fitsarana eo an-toerana dia tsy ho tonga mivantana, fa ny Komity Mpanolotsaina an'ny Fianakaviana dia tsy maintsy mahazo taratasy fanamarinana tsy misy fanoherana na taratasy famindrana alohan'ny hanatonana ny fitsarana.
Mila maka ireto antontan-taratasy manaraka ireto ireto ny tompon'andraikitra:
Taratasy ara-panambadiana / Fifanekena ara-dalàna.
Mariho fa raha natao tany ivelan'ny UAE ny fanambadiana dia tokony hanaja ny antontan-taratasy ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny ao amin'io firenena io ary nanamafy izany ny masoivoho UAE ao amin'io firenena io.
Ary koa ny antontan-taratasy mitovy amin'izany dia tsy maintsy porofoin'ny minisitry ny raharaham-bahiny UAE, izay adika amin'ny teny arabo ary avy eo hangataka azy io ny minisiteran'ny fitsarana.
Ny vady sy ny vady no antenaina ho tonga manokana
Ny komity mpitari-dalana ny fianakaviana dia manome daty handrenesana ilay ankolafy hafa. Rehefa nametraka ny mpangataka dia tokony hasaina hifanatrika eo alohan'ny komity ny mpivady ary tsy azon'ny solontenan'ny fianakaviana na ny mpisolovava azy.
Taratasy tsy misy fanoherana
Raha toa ka tsy mipoitra amin'ny daty fihainoana ny ankolafy hafa dia misy daty iray hafa mety homen'ny Komity Mpitari-pianakaviana alohan'ny hamoahana ny taratasy Tsy misy fanoherana hametrahana ny raharaham-pianakaviana. Rehefa misy ny fampandrenesana toy izany alefa any amin'ilay voavaly dia ilaina ny fahazoana torohevitra ara-dalàna an'ny mpitsara alohan'ny datin'ny fotoam-pitsarana.
Fitsipi-pitondran-tena ao amin'ny UAE
Ny fitsipiky ny kolontsaina sy fitondran-tena ao amin'ny UAE dia tokony hojerena rehefa manatona ny komity mpitarika ny fianakaviana. Samy lahy sy vavy no andrasana hanao akanjo araka ny tokony ho izy.
Azon'ny NOC mamela ny mpitsara handefa ny raharaha any amin'ny fitsarana
Amin'ny tranga iray izay nanatrehan'ny roa tonta ny Komitin'ny Torolàlana ho an'ny Fianakaviana ary tsy nahatratra vahaolana mahavariana izy ireo dia nisy taratasy navoakan'ny Komity misahana ny fianakaviana. Ity NOC ity dia mamela ny mpitaky handefa ny raharaha any amin'ny fitsarana ary hanomboka ny dingana ara-dalàna fisaraham-panambadiana.
Mangataha fanampiana avy amin'ny mpisolovava
Raha toa ka mahatratra vahaolana marim-pototra ny antoko sy vonona hanao sonia fifanarahana amin'ny vahaolana amin'izany, tena zava-dehibe tokoa izany fa mitady ny fanampian'ny mpisolovava amin'izany fotoana izany izy ireo.
Voasonia teo anoloan'ilay mpitsara avy ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Fianakavian'ny fianakaviana ny fifanarahana fifanarahana amin'ity tranga ity ary tazonina ao anaty antontan-taratasy izy ireo ho an'ny firesahana rehetra amin'ny ho avy miaraka amin'ny roa sosona nomen'ny antoko.
Lalàn'ny ankohonana, fampifangaroana, tranga fisaraham-panambadiana, fahombiazana & lova
Afaka matoky ianao fa ny antsika mpisolovava fianakaviana dia hitari-dalana anao